Naya Nepal Postसुष्मा स्वराजका गुप्त र अघोषित एजेण्डा - Naya Nepal Post
मुख्यमुख्य नेपाली राजनीतिक पात्रहरुको कानमा साउती गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण सकियो । यो भ्रमण सफल भयो ? उद्देश्य पूरा गरिन् ? भ्रमणले नेपाललाई लाभहानी के भयो ? अनि, यो भ्रमणले भविष्यमा नेपाललाई के असर गर्छ ? यसबारे विमर्श गर्नैपर्ने भएको छ ।
स्वराज भ्रमणका गुप्त एजेण्डा समयले पर्दा खोल्दै जाँदा देखिँदै जाला । अघोषित एजेण्डा चाहिँ लगभग पहिचान गर्न सकिन्छ । अघोषित एजेण्डा भनेको एमाले, केपी ओली र भावी सरकारसँग सम्बन्ध सुधार्नु नै हो । अघोषित एजेण्डा बोक्रा हो, गुदी अर्कै हुन्छ । कूटनीतिमा बोक्रा अनुसारको गुदि हुँदैन । देख्दा एक चिज हुन्छ, छाम्दा अर्काे हुन्छ अनि चाख्दा झन् अर्कै हुन्छ । कूटनीतिको विचित्र लीला यही हो ।
प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न नसकिएका ओलीलाई फकाउनु र एमाले–माओवादी एकीकरण हुन नदिनु सुष्माको ठोस कार्यभार थियो । ओली सरकारमा कुनै एउटा मधेसवादी दललाई भित्र्याउनु अर्काे कार्यभार हो । ओली कति फकिए ? तल चर्चा गर्दै जाउँला । जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ, भारतले चाहेर या नचाहेर भन्दा पनि दुई पार्टीका मुख्यमुख्य नेताहरुको आन्तरिक स्वार्थले एकीकरण टर्दैछ ।
गत साताभरी भारतमा रायसिना गोष्ठी चर्चित रह्यो । मुख्यगरी भारत–अमेरिका मोर्चासँग निकट देशका प्रतिनिधिहरुको सो रणनीतिक गोष्ठी चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्नेमा लक्षित थियो । भारतीय विदेश सचिव एस. जयशंकरको कार्यकालको अन्तिम ठूलो काम थियो रायसिना गोष्ठी । गोष्ठीमा जयशंकरले चीनको बढ्दो प्रभाव भारत र विश्व व्यवस्थाका लागि खतरा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तथापि, पात्रहरुको परिवर्तनले भारतीय रणनीतिलाई धेरै फरक पर्दैन, पात्र परिवर्तनले विदेश मामिलामा ठाडै असर पर्ने नेपालमा हो । पात्र फेरिएर मात्र होइन, पात्रको नियत फेरिएर समेत नेपालको विदेश नीतिमा असर पर्ने गरेको छ । ओलीको अब नियत फेरिन्छ ? सुष्माको भ्रमणसँगै मुख्य रुपमा उठेको प्रश्न यही हो ।
भावी सरकारलाई यसरी हूल बाँधेर आएर बेमौसममा अग्रिम शुभकामना दिनुको अर्काे अर्थ चेतावनी पनि हो । नेपालको सरकारले के गर्छ भन्ने पूर्ण चासो र सरोकार राख्छौं, हाम्रो रुचीभन्दा बाहिर गयौ भने सहँदैनौं भन्ने सन्देश हो । ओलीसँग वन–टु–वन वार्तामा सुष्माले भारतीय रुची र सरोकारका विषय प्रष्टैसँग राखिन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । र, उनले आफ्ना रुची र सरोकार सम्बोधन गरे सहयोगको वचन पनि अवश्य दिइन् ।
अब सुष्माले आफ्नो सहयोगको बदलामा ओलीबाट पनि सहयोग खोज्नेछिन् । समस्या यहिँनेर हो । सुष्माले जे भनिन्, ओलीले त्यो मान्ने कि नमान्ने ?
यो भ्रमण सफल कि असफल ? उपलब्धी भयो कि भएन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सुष्माले तत्काल पाउँदिनन् । किनभने सुष्माले जे प्रश्न छाडेर गएकी छिन्, त्यसको जवाफ आगामी दिनमा ओली तथा नेपाल सरकारको व्यवहारबाट पाउनेछिन् । त्यसबैला मात्र यो भ्रमणको औचित्य सुष्माले थाहा पाउनेछिन् ।
के गर्छन् ओली ?
ओलीले अब के गर्छन् ? सुष्मा आउनु अघि पनि उठेको प्रश्न हो र सुष्मा गएपछि पनि उठिरहने प्रश्न हो यो ।
सुष्माको भ्रमणको असर नेपाली राजनीतिमा आगामी दिनमा कसरी देखिएला ? उत्सुकताको मात्र नभएर चिन्ताको पनि विषय हो । यो चिन्ता हटाउने एकमात्र जिम्मेवारी ओलीको हो । समग्रमा भन्न पर्दा सुष्मा स्वराज परीक्षा दिएर गइन्, नतिजा आउन बाँकी छ । र, उनले ओलीलाई पनि परीक्षाको मैदानमा उतारिदिएकी छिन् ।